Ducadii ducada maalinta. ? Hel dhammaan noocyada barakooyinka
Salaadda ducada waa inay noqotaa mid joogto ah afkeenna maxaa yeelay waxaynu ku dhisi karnaa sidii xayndaab nagu wareegsan halkaas oo waxyaabaha wanaagsan ay yihiin kuwa geli kara.
Ereyga Eebbe wuxuu noo sharxayaa in barakooyinka Eebbe aysan ku kordhin wax murugo ah tanina waa furaha si loo go'aamiyo kuwaas oo ah barakooyinka Ilaahay ka yimid iyo kuwa aan ahayn. Xaaladdan oo kale markaan sameyno salaaddahan barakeysan waxaan u mahadcelin karnaa, nafteenna ama qof kale u duceyneynaa oo u aqoonsannaa awoodda Ilaah ee nolosheena.
1 Salaadda ducada
2 1) Salaadda in la helo dhammaan ducooyinka barakeysan
3 2) Salaadda ducada maalinta
4 3) Salaadaha barakada Ilaahay
5 4) Salaad in Eebbe looga mahadnaqo barakada oo dhan
5.1 Ducada barakada ah miyuu runtii xoog badan yahay?
Barakada waa faa iidooyinka aan dhamaanteen rabno ama aan rabno inaan helno waqti kasta oo nolosheena ah.
Waqtiyo badan ayaan helnaa iyaga keligood iyo xitaa annaga oo aan garaneynin oo mararka qaarkood waa inaan weydiinno ama la dagaallano iyaga. Macno ahaan, ducadda barakada waxay noqotaa hub awood badan oo aan u adeegsan karno wakhti kasta.
1) Salaadda in la helo dhammaan ducooyinka barakeysan
Waxaan kaa baryayaa inaad igu ducayso,
u ducee waxa aan gacmahayga maanta taabto oo dhan,
Shaqadayda ha ku barakeeyo sidoo kale iga caawi inaan si sax ah u qabto, oo aan khaladaad sameyn.
U ducee kuwa ila shaqeeya oo dhan;
Aabbe, u ducee mid kasta oo ka mid ah fikradayda iyo dareenkeyga,
si aadan u fikirin ama xumaan u dareemin,
sidaa darteed wax kasta oo aniga igu jira waa jacayl;
mid kasta ha ku duceysto ereyadayda,
Ma aha in la iraahda waxyaabo aan hadhow qoomamoon karo.
Barakee daqiiqad kasta oo noloshayda ah,
si taas aan ula mid noqdo waxaan u qaadan karaa sawirkaaga iyo eraygaaga kuwa u baahan.
Sayidow, ii ducee, inaan ku dhex ahaado image iyo ekaantaada,
in loo keeno waxyaabo wanaagsan dadka oo dhan
taasi waa hareerahayga iyo si ay iyagu dhammaantood kuu duceeyaan.
Waxaan kaa baryayaa in qof kasta oo qalbigayga ku jira uu kuu duceeyo,
Ruuxa Quduuska ah iyo bikradda;
Duco jacayl, caafimaadka, lacagta, qoyska, shaqo, ganacsi, xubin qoyska ka mid ah, carruurta iyo xitaa in laga tago gurigeenna maalin kasta, ducooyinka ayaa lagama maarmaan u ah dhammaan qaybaha nolosheena.
Waxaa muhiim ah inaan ogaano sida loo dhiso qoys ama mabda 'shaqsiyeed si aan u tukanno salaadan maalin kasta ama xitaa hal mar usbuucii. Waxaan sidoo kale u bari karnaa carruurteenna iyo qoyskeenna markaan sidan u xoojineynaa iimaanka qoyska sidoo kale waxaan la qaadan karnaa waqti tayo leh.
2) Salaadda ducada maalinta
Aabaha barakaysan ee awooda leh,
Waad ku mahadsan tihiin maalintan cusub,
Tan iyo dhalashadii qorraxdayda, Iyo socodkayga iyo socodkayga aan isaga u qabo,
Waxaan fursad u helay inaan kugu soo dhowaado, oo aan noqdo server ka fiican sidii aan shalay ahaa.
Waan kaaga mahadcelinayaa qoyskii aad igu gelisay,
asxaabtayda ku hagaya wanaagga
iyo wax kasta oo kuu horseeda jidkaaga, oo matalaya wax wanaagsan noloshayda.
Sayidow, ku ammaani Ruuxaaga Quduuska ah,
mid kasta oo ka mid ah tallaabooyinkayga, si aad u noqotid tusaale qalbigaaga wanaagsan
dhammaan kuwa jidka ka hela.
Carrabkayga, bushimahayga iyo codkayga,
si ay iyagu u difaacaan eraygaaga iyo gudbiyahooda.
Sayidow, dhiiggayga quduuska ah gacmahayga ku nadiifi gacmahayga,
They they they they they they they they they they they they they they they they they they they they they they they they Iyagu ha ka dhergaan addeeciddaada Ilaah, si shuqulladaydu u barako.
Farxaddaadu ha noqotee waxa qalbigayga taabanaya, Oo waxaa shaabad lagu xukumay inaan ogaado inaan ahay addoonkaaga aaminka ah,
sidaasna qalab u noqo nabadaada rabbaaniga ah.
Waxaan gacantaada gelinayaa wax kasta oo aan ahay maanta iyo waxaan noqon doono,
si aad aniga ii qaabayso sumcaddaada iyo doorbidistaada,
Qaabkaasoo kale oo aan kula mid ahay, aawadaa dadkaaga aawadood,
iyo in magacaaga lagu ammaano meel walba oo ay gudbto.
Tan waxaan ku weyddiistaa magaca Aabaha, wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah.
Baryadan ducada ee maanta waa mid fudud.
La Barakada maalinta waa wax aan u baahan nahay inaan maalin walba la dagaallanno. Sida ugu habboon, subaxdii samee sidaa darteed maalinta oo dhan waa barakaysan tahay. Dadka qaar sida caadiga ah waxay u shidayaan shumac qaas ah si ay u tukadaan salaaddaan, si kastaba ha noqotee waa la sameyn karaa wakhti kasta iyo goob kasta.
Tusaalaha salaadda aabaha Aabahayaga ee aan ku aragno Kitaabka Quduuska ah wuxuu ina barayaa inay tahay inaan weydiisano kibisteena maalin walba iyo in rootida sidoo kale ay tahay astaan ​​dhammaan barakada aan weydiisan karno ama xitaa kuwa aanan ogeyn waxaan u baahan nahay laakiin in Sayidku yaqaan.
3) Salaadaha barakada Ilaahay
Ilaah baa mahad leh inuu i siiyay barakada ah inaan maalin uun sii noolaado,
Waad ku mahadsan tahay maxaa yeelay maanta waxaan mar kale arki karaa sida ay u weyn tahay abuuritaankaaga iyo jacaylkaagu.
Maanta, waxaan ahay qof faraxsan,
nasiib wanaag iyo mahadnaq inaad heshay fursad cusub oo aan ku qaato maalin nabdoon,
Jacayl, badbaadin iyo ugu muhiimsan, hagahaaga.
Sayidow, xoog i sii si aan uga gudbo caqabad kasta oo jidkayga ku timaadda,
igu dhiirrigeli oo xoog yeelo sida aad tahay,
Ka dhig jacaylkaaga inuu daboolo noloshayda oo dhan iyo inta igu wareegsan oo dhan jidkayga.
Maalin kasta oo bilaabata waxaan kaaga baryayaa inaad i dhageysato oo aad kaga jawaabto deeqsinimadaada weyn iyo naxariis.
Waan ogahay inay naftaydu kuu baahan tahay maalin walba, oo waxaad igu siisaa barakooyinka oo dhan.
Awood u lahaanshaha kor u qaadista ducada barakada leh ee Ilaahay iyo ducadda magaca Ilaah oo aad weydiisato inuu ina barakeeyo waa inay noqotaa mid ka mid ah tillaabooyinka aan qaadno salaadda tukashada.
Barakooyinka Eebbe waxaa marka hore lagu helaa boqortooyada ruuxiga ah ka dibna jidh ahaan Taasi waa habka aan u leenahay inaan ula dagaalano waxa aan rabno inaan gaarno oo taas kaliya aan ku gaari karno ruuxa.
4) Salaad in Eebbe looga mahadnaqo barakada oo dhan
Mahadcelintu waa qiimo ay waqti iyo xannaanadii canabka ahayd u ​​muuqatay inay luntay laakiin sayidka wanaagsan ee eraygiisa ayaa noo sheegaya inay tahay inaannu u mahadnaqno.
Waxaa jira sheeko mid ka mid ah mucjisooyinka Ciise markii uu bogsiiyey toban baras oo mid ka mid ahna uu u soo noqday inuu u mahad celiyo, kuwa kale si fudud ayey ugu raaxeysteen nolol leh gebi ahaanba caafimaad leh, tani waxay ina baraysaa sida aan ugu mahadnaqno aan u noqon karno taas kaliya toban ayaa soo noqon doona, taasi waa inay noqotaa, marwalba maskaxda ku hay mahadnaqa ilaahay barakadayada aan ka helno isaga.
Kaliya furista indhahayaga maalin cusub, neefsashada iyo haysashada qoyskeenna, waa waxyaabo yaryar oo marar badan aan ilaaween inaan ku mahadnaqno Ilaah. Aynu baranno inaan u mahadnaqno oo aan kor u qaadno tukashada mahadnaqida maalin kasta dhammaan ducooyinka aan helnay
Ducada barakada ah miyuu runtii xoog badan yahay?
Tukashadu waa mid awood leh waa waxa lagu sameeyo iimaan maxaa yeelay waa shayga kaliya ee khasabka ah salaaddayada La maqlo.
Haddii aan weydiisanno shaki ama is-jeclaan, ma rumeynno inuu Sayidku na siin karo waxaan dalbaneyno, taasi waa duco madhan oo aan fulin doonin ujeeddadiisa. Rumaysad la'aan suurtagal ma aha suurtagalnimada in laga farxiyo Ilaah, baridda sharafta leh ee ku jirta Kitaabka Quduuska ah waa inaan had iyo jeer xasuusnaano.
Waxaad had iyo jeer iimaan badan haysataa inta aad duceyso ducada baryada maalinta ilaahay iyo inaad hesho dhamaan ducooyinka barakeysan.
Salaadda xoogga leh ee dhiigga Masiix